USD 10000 Study Award Program - Future Link
FUTURE Link မှ ပညာသင်ဆု ဒေါ်လာတစ်သောင်း လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
– လျှောက်ထားသူသည် အသက် (၁၅)နှစ်မှ (၂၄)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
– မည်သည့် နိုင်ငံ၊ မည်သည့် တက္ကသိုလ်၊ မည်သည့် ဘာသာရပ်ကိုမဆို ရွေးချယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
– လျှောက်ထားသူသည် မိမိတက်ရောက်လိုသော တက္ကသိုလ် ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကို ဦးတည်လျှောက်ထားရပါမည်။
– အခြေခံပညာကိုးတန်းအောင်မြင်သူများ၊ အခြေခံပညာဆယ်တန်းအောင်မြင်သူများ၊ တရုတ်ကျောင်း ကိုးတန်း၊ဆယ်တန်း၊ဆယ့်နှစ်တန်းအောင်မြင်သူများ၊ International School Grade 10, Secondary III အောင်မြင်သူများ၊ အခြား Diploma, Certificate ကိုင်ဆောင်ထားသူများ အားလုံးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
– အမှတ်ကန့်သတ်ချက်နှင့် အခြားအရည်အချင်းကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ – မိမိပညာအရည်အချင်းနှင့် မည်သည့်နိုင်ငံမည်သည့် တက္ကသိုလ် (သို့) ကျောင်းများသို့တက်ရောက်ခွင့် ရရှိနိုင်မည်ကို ဖောင်ဖွင့်ရက်မတိုင်မှီ အခမဲ့ လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
– ဇူလိုင် (၂၂)ရက်မှ စက်တင်ဘာ (၂၂)ရက်အတွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
– လျှောက်ထားလိုသူသည် online application မှသာ လျှောက်ထားရပါမည်။
– Online application form ဖြည့်ပြီးလျှင် studyawards@futurelink.com.mm သို့ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံး၏ Scan copy များကိုပေးပို့ရပါမည်။
– အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို အောက်တိုဘာလတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရပါမည်။ (ဖြေဆိုရမည့် အကြောင်းအရာမှာ မိမိရွေးချယ်ထားသော ဘာသာရပ်၊ တက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် မိမိ၏အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။)
– နိုဝင်ဘာလတွင် interview shortlist ကြေငြာပါမည်။
– ဒီဇင်ဘာပထမပတ်တွင် လူတွေ့ဖြေဆိုပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာတတိယပတ်တွင် study award ရရှိသူအားကြေငြာပေးပါမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ Link တွင် ၀င်ရောက်၍ စာရင်းသွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
← TMC, Singapore One to One SectionFuture Link International Education Provider USD 10,000 Study Award Application. →
Myo Min Thant on June 29, 2017 at 3:24 pm
I am Myo Min Thant. Can we apply USD 10000 Study Award Program for Master program? Please let me know about my question.
Hein Khant Zaw on July 5, 2017 at 5:49 pm
My name is Hein Khant Zaw and I just finished Matriculation examination. I am interested in the USD 10000 study award program. I would like to apply for that program. So how can I apply it ? Please let me know.
Tint Zaw Win on July 10, 2017 at 10:39 am
Dear Sir, I need your scholarship, I want to learn about environmental Science in Thailand. Because of our country is going to development , I wanted to develop my country with sustainable development . So I want to save Environmental for sustainable . So I want to learn technically and deeply about it. SO I NEED YOUR SCHOLARSHIP